ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: ကဒါဖီကို ဘယ်သူတွေ သတ်ခဲ့တာလဲ
ကဒါဖီကို ဘယ်သူတွေ သတ်ခဲ့တာလဲ
အင်အားကြီးဆိုတဲ့ နိုင်ငံတွေကို အာခံလို့
သေဆုံးခါနီး စကားသံယဲ့ယဲ့ ထွက်လာတယ်။
"မင်းတို့ကို ငါဘာများလုပ်မိလို့လဲကွာ" တဲ့။
နိုင်ငံရဲ့ အဖြစ်မှန်တွေကို မသိခဲ့ဘူးပေါ့။
ကဒါဖီကို သတ်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး။
အနားပြာတွေက ကဒါဖီကို သတ်ခဲ့တယ်။
သူ့လော်ဘီတွေက သူ့ကို သတ်ခဲ့တယ်။
၁၃ - ၂ - ၂၀၂၀
ကဒါဖီကို ဘယျသူတှေ သတျခဲ့တာလဲ
အငျအားကွီးဆိုတဲ့ နိုငျငံတှကေို အာခံလို့
သဆေုံးခါနီး စကားသံယဲ့ယဲ့ ထှကျလာတယျ။
"မငျးတို့ကို ငါဘာမြားလုပျမိလို့လဲကှာ" တဲ့။
နိုငျငံရဲ့ အဖွဈမှနျတှကေို မသိခဲ့ဘူးပေါ့။
ကဒါဖီကို သတျခဲ့တာ မဟုတျဘူး။
အနားပွာတှကေ ကဒါဖီကို သတျခဲ့တယျ။
သူ့လျောဘီတှကေ သူ့ကို သတျခဲ့တယျ။
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 12:45 PM
As stated by Stanford Medical, It is really the SINGLE reason this country's women live 10 years more and weigh 19 kilos lighter than us.
(And by the way, it has totally NOTHING to do with genetics or some secret diet and EVERYTHING about "HOW" they eat.)
Tap on this link to reveal if this short questionnaire can help you release your real weight loss potential
As claimed by Stanford Medical, It is really the ONLY reason women in this country live 10 years longer and weigh 42 pounds lighter than us.
(And by the way, it has absolutely NOTHING to do with genetics or some secret diet and really, EVERYTHING about "how" they eat.)
Tap this link to discover if this brief questionnaire can help you find out your true weight loss potential